မြန်မာပြည်သူတွေ သိထားသင့်တဲ့ ရရှားထုတ် ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး တကယ်ပဲ ထိရောက်မှာလား၊ အန္တရာယ်ကင်းရဲ့လား… – Na Pann San
Na Pann San W | August 13, 2020 | Knowledge | No Comments
ရုရှား ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေး ( Gam-COVID-Vac )
ရုရှားဂြိုလ်တု Sputnik V ရဲ့ အမည် ကို romanized လုပ်ပြီးပေးထား တဲ့ ဆေးနာမည်ဖြ စ်တယ် ။ ဩဂတ်စ်လ ၁၁ ရက်နေ့ မှာ ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး Covid ကာကွယ် ဆေးအနေ နဲ့ ရုရှား မှာ သူ့ဘာသာသူ လက်ဦးမှု ယူပြီးအတင်း မှတ်ပုံတင်ချလိုက်တယ် ။ ပြဿနာက Covid-19 ကို တကယ်စိတ်ချရလောက် အောင်ကာကွယ်ပေးမယ့် ဆေးဟုတ်သလား ဆိုတာပါပဲ..? ဩဂတ်စ်လ ၈ ရက်နေ့အထိ လောက်လောက် လားလား သိပ္ပံနည်းကျသုသေသနပြုထား တဲ့ report ထွက်လာမှု မရှိသေးတာပဲ။
ပထမရတယ် ကြေညာပြီးတော့ ရီပို့ကဒ်တောင်းကြည့်တော့ မပြနိုင်ဘူးဖြစ်နေ တယ် ။ ကမ္ဘာ့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေ က ဒီရုရှား ကာကွယ်ဆေး နဲ့ပတ်သက်ပြီး ယုံကြည်ဖို့ ခက်ခဲကြောင်း ပြောကြတော့…ရုရှားကျန်းမာရေး ဝန်ကြီး က ဒီနေ့ ပဲ အဲ့လိုပြောတာတွေက အခြေအမြစ် မရှိပါဘူးတဲ့ ။ ရုရှား သမ္မတ ပူတင်က ဒီကာကွယ်ဆေးက လိုအပ်တာတွေပြည်စုံ ပါတယ်တဲ့ ။ သူ့သမီးတောင် အဲ့ဆေးထိုးထားပြီးပြီတဲ့ ။ အဲ့ဒီဆေး ကို လိုချင်လို့ကမ်းလှမ်းနေတဲ့ နိုင်ငံတွေရှိနေပါတယ်တဲ့။
WHO ကတော့ ရုရှားတာဝန် ရှိသူတွေနဲ့ ဒီဆေး ကို လေ့လာကြည့် ဖို့ ပြောဆိုနေ ပါတယ်တဲ့ ။ ပညာရှင်တွေက ဘာလို့ အယုံအကြည်မရှိတာလဲ…? အခုထိ နောက်ဆုံး phase3ကို လူများများ နဲ့စမ်းသပ်နေတဲ့ ကာကွယ်ဆေး ၆ မျိုးမှာ မပါဝင်ခဲ့ဘူး ။ ဂျာမန် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး က အပြတ်ပြောလိုက်တယ် ။ အဲ့ဒီ ရုရှားကာကွယ်ဆေးက သေသေချာချာစမ်းသပ်မှု ကို မလုပ်ရသေးဘူးတဲ့…။
သေသေချာချာ မစမ်းသပ်ရသေးတဲ့ ကာကွယ်ဆေး ကို လူသန်း နဲ့ချီထိုးပေး မှာ အလွန် အန္တရာယ်များပါ သတဲ့ ။ ဆေးက ပြဿနာ ရှိရင်လည်း လူတွေဒုက္ခရောက်သွားနိုင် သလို၊ လုံးဝမစွမ်း တဲ့ မိုးရေသာသာဆေး ကို ယုံကြည် စိတ်ချစွာထိုးထားပြီး Covid လူနာတွေ နဲ့ စိတ်ချစွာထိတွေ့ဆက်ဆံ မိခဲ့ရင်လည်း အလွန်အန္တရာယ်ကြီးနိုင် ပါတယ်။ ဂျာမန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးပြောတာ ရှင်း ပါတယ် ။ ပထမဆုံး ဆိုတာတွေက အဓိက မဟုတ်ပါဘူး တကယ်အန္တရာယ် ကင်းမကင်းကသာ အဓိကဖြစ်ပါ တယ်တဲ့။
“It is not about being first somehow… it is about havingasafe vaccine.” တဲ့။
ထို့ အတူပဲ အထင်က ရပုဂ္ဂိုလ် အတော်များများက ယုံကြည်ရ ခက်ကြောင်းထုတ်ပြောလာကြတယ် ။ ဖိလစ်ပိုင်က ဒူတာတေးလိုလူမျိုးကတော့ သူကိုယ်တိုင်စမ်းကြည့်ချင် ပါတယ်တဲ့ ။ ရုရှား ကာကွယ်ဆေးကဘာ နဲ့လုပ်ထားသလဲ..? ရိုးရိုးတုပ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ်ကို Covid ဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ Spike ပရိုတိန်းတွေထည့်ပေး ထားပြီး လူရဲ့ ကိုယ်ခံအားကိုနှိုးဆွယူတာဖြစ် ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ ဆေးကုမ္ပဏီကြီးတွေက ရုရှား အစိုးရ ကို မှတ်ပုံတင်မှုမပြုခင် မှာ အောင်မြင်တဲ့ phase3စမ်းသပ်မှုပြုလုပ် ဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့ကြပါ တယ်။
ဘယ်လောက်ပဲ အစပိုင်း စမ်းသပ်မှုမှာအခြေအနေကောင်းနေတဲ့ ဆေးဖြစ်ဖြစ် phase3ကိုအောင်မြင် ဖို့ အခွင့်အရေး ၄၀ ရာနှုန်းပဲရှိ လို့ ဖြစ် ပါတယ် ။ တကယ်စိတ်ချရတဲ့ Covid ကာကွယ်ဆေး တစ်မျိုးမျိုး ထွက်ပေါ်ပါ့မလား ဆိုတာ အားလုံးက စိုးရိမ်နေဆဲဖြ စ်ပါတယ် ။ Phase3ကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် စမ်းသပ်ခံရဲ မှသာလျှင် တကယ်စိတ်ချရပြီး အန္တရာယ်ကင်း တဲ့ ကာကွယ်ဆေး ထွက်ပေါ်လာမှာ ဖြစ် ပါတယ်။
တကယ် စွမ်းမစွမ်း စောင့်ကြည့်ကြ ဖို့ လို ပါကြောင်း ။ Richard Myo Thant 12-Aug-2020
ရုရှား ကိုဗဈ ကာကှယျဆေး ( Gam-COVID-Vac )
ရုရှားဂွိုလျတု Sputnik V ရဲ့ အမညျ ကို romanized လုပျပွီးပေးထား တဲ့ ဆေးနာမညျဖွ ဈတယျ ။ ဩဂတျဈလ ၁၁ ရကျနေ့ မှာ ကမ်ဘာ့ပထမဆုံး Covid ကာကှယျ ဆေးအနေ နဲ့ ရုရှား မှာ သူ့ဘာသာသူ လကျဦးမှု ယူပွီးအတငျး မှတျပုံတငျခလြိုကျတယျ ။ ပွဿနာက Covid-19 ကို တကယျစိတျခရြလောကျ အောငျကာကှယျပေးမယျ့ ဆေးဟုတျသလား ဆိုတာပါပဲ..? ဩဂတျဈလ ၈ ရကျနအေ့ထိ လောကျလောကျ လားလား သိပ်ပံနညျးကသြုသသေနပွုထား တဲ့ report ထှကျလာမှု မရှိသေးတာပဲ။
ပထမရတယျ ကွညောပွီးတော့ ရီပို့ကဒျတောငျးကွညျ့တော့ မပွနိုငျဘူးဖွဈနေ တယျ ။ ကမ်ဘာ့ သိပ်ပံပညာရှငျတှေ က ဒီရုရှား ကာကှယျဆေး နဲ့ပတျသကျပွီး ယုံကွညျဖို့ ခကျခဲကွောငျး ပွောကွတော့…ရုရှားကနျြးမာရေး ဝနျကွီး က ဒီနေ့ ပဲ အဲ့လိုပွောတာတှကေ အခွအေမွဈ မရှိပါဘူးတဲ့ ။ ရုရှား သမ်မတ ပူတငျက ဒီကာကှယျဆေးက လိုအပျတာတှပွေညျစုံ ပါတယျတဲ့ ။ သူ့သမီးတောငျ အဲ့ဆေးထိုးထားပွီးပွီတဲ့ ။ အဲ့ဒီဆေး ကို လိုခငျြလို့ကမျးလှမျးနတေဲ့ နိုငျငံတှရှေိနပေါတယျတဲ့။
WHO ကတော့ ရုရှားတာဝနျ ရှိသူတှနေဲ့ ဒီဆေး ကို လလေ့ာကွညျ့ ဖို့ ပွောဆိုနေ ပါတယျတဲ့ ။ ပညာရှငျတှကေ ဘာလို့ အယုံအကွညျမရှိတာလဲ…? အခုထိ နောကျဆုံး phase3ကို လူမြားမြား နဲ့စမျးသပျနတေဲ့ ကာကှယျဆေး ၆ မြိုးမှာ မပါဝငျခဲ့ဘူး ။ ဂြာမနျ ကနျြးမာရေးဝနျကွီး က အပွတျပွောလိုကျတယျ ။ အဲ့ဒီ ရုရှားကာကှယျဆေးက သသေခြောခြာစမျးသပျမှု ကို မလုပျရသေးဘူးတဲ့…။
သသေခြောခြာ မစမျးသပျရသေးတဲ့ ကာကှယျဆေး ကို လူသနျး နဲ့ခြီထိုးပေး မှာ အလှနျ အန်တရာယျမြားပါ သတဲ့ ။ ဆေးက ပွဿနာ ရှိရငျလညျး လူတှဒေုက်ခရောကျသှားနိုငျ သလို၊ လုံးဝမစှမျး တဲ့ မိုးရသောသာဆေး ကို ယုံကွညျ စိတျခစြှာထိုးထားပွီး Covid လူနာတှေ နဲ့ စိတျခစြှာထိတှဆေ့ကျဆံ မိခဲ့ရငျလညျး အလှနျအန်တရာယျကွီးနိုငျ ပါတယျ။ ဂြာမနျကနျြးမာရေးဝနျကွီးပွောတာ ရှငျး ပါတယျ ။ ပထမဆုံး ဆိုတာတှကေ အဓိက မဟုတျပါဘူး တကယျအန်တရာယျ ကငျးမကငျးကသာ အဓိကဖွဈပါ တယျတဲ့။
ထို့ အတူပဲ အထငျက ရပုဂ်ဂိုလျ အတျောမြားမြားက ယုံကွညျရ ခကျကွောငျးထုတျပွောလာကွတယျ ။ ဖိလဈပိုငျက ဒူတာတေးလိုလူမြိုးကတော့ သူကိုယျတိုငျစမျးကွညျ့ခငျြ ပါတယျတဲ့ ။ ရုရှား ကာကှယျဆေးကဘာ နဲ့လုပျထားသလဲ..? ရိုးရိုးတုပျကှေးဗိုငျးရပျဈကို Covid ဗိုငျးရပျဈရဲ့ Spike ပရိုတိနျးတှထေညျ့ပေး ထားပွီး လူရဲ့ ကိုယျခံအားကိုနှိုးဆှယူတာဖွဈ ပါတယျ။ နိုငျငံတကာ ဆေးကုမ်ပဏီကွီးတှကေ ရုရှား အစိုးရ ကို မှတျပုံတငျမှုမပွုခငျ မှာ အောငျမွငျတဲ့ phase3စမျးသပျမှုပွုလုပျ ဖို့ တိုကျတှနျးခဲ့ကွပါ တယျ။
ဘယျလောကျပဲ အစပိုငျး စမျးသပျမှုမှာအခွအေနကေောငျးနတေဲ့ ဆေးဖွဈဖွဈ phase3ကိုအောငျမွငျ ဖို့ အခှငျ့အရေး ၄၀ ရာနှုနျးပဲရှိ လို့ ဖွဈ ပါတယျ ။ တကယျစိတျခရြတဲ့ Covid ကာကှယျဆေး တဈမြိုးမြိုး ထှကျပျေါပါ့မလား ဆိုတာ အားလုံးက စိုးရိမျနဆေဲဖွ ဈပါတယျ ။ Phase3ကို ကယျြကယျြပွနျ့ပွနျ့ စမျးသပျခံရဲ မှသာလြှငျ တကယျစိတျခရြပွီး အန်တရာယျကငျး တဲ့ ကာကှယျဆေး ထှကျပျေါလာမှာ ဖွဈ ပါတယျ။
တကယျ စှမျးမစှမျး စောငျ့ကွညျ့ကွ ဖို့ လို ပါကွောငျး ။ Richard Myo Thant 12-Aug-2020
သစ် တံခါး ဆရာတော်ကြီး ရဲ့ ” ရွှေသိဒ္ဓိ တစ်ထောင် ပွင့် လေ ဓာတ် အိမ်ဆောင် ” အိုေ တာင်မဆင်းရဲ
ရခိုင်ပြည်နယ် ၊ ရမ်းဗြဲကျွန်း ကို အပိုင်စားရတဲ့ ” ပြာတောင်ရှင်မ ” နဲ့ နေရာချင်း အလဲခံရသူ